Mareykanka oo dilay Qassim al-Rimi
Madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii xaqiijiyey in Mareykanka ay dileen hoggaamiyaha Al-Qacidada Jasiiradda Carbeed – malamo kadib markii kooxdaas ay sheegatay mas’uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Florida.
“Mareykanka waxay Yemen ka fuliyeen howl-gal ka hortag argagixiso kaasi oo cirib-tiray Qassim al-Rimi, aas-aasaha iyo hoggaamiyaha Al-Qacidada Jasiiradda Carbeed,” ayuu Trump ku yiri bayaan uu soo saaray Aqalka Cad.
Al-Qacidada Jasiiradda Carbeed ayaa Axaddii sheegatay toogsho 6-dii December ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee Pensacola, kaasi oo uu fuliyey askari Sacuudiyaan ah oo halkaas lagu tababarayey, laguna dilay saddex qof oo Mareykan ah.
Washington ayaa Al-Qacidada Jasiiradda Carabeed, oo fadhigeedu yahay Yemen, u aragta laanta ugu qatarsan shabakadda argagixisada ee Al-Qacida.
“Intii uu hogaaminayey Rimi, Al-Qacidada Jasiiradda Carbeed waxay geysteen rabashado aan la aqbali karin oo ka dhan ah shacabka Yemen, waxayna isku dayeen oo ay dhiiri-geliyeen weeraro ka dhan ah Mareykanka iyo ciidamadeena,” ayuu yiri Trump.
“Geeridiisa waxa ay sii wiiqeysaa Al-Qacidada Jasiirradda Carabeed iyo dhaq-dhaqaaqa Al-Qacida ee dunida, waxayna dhoweyneysaa inaan cirib-tirno halisaha ay kusoo rogaan amnigeena qaranka.”​